Budata WinRAR maka Windows
Free Budata maka Windows (3.07 MB)
Taa, Winrar bụ mmemme zuru oke yana njiri mara mma netiti mmemme mkpakọ faịlụ. Mmemme a, nke na -akwado ọtụtụ ụdị faịlụ, na -adọrọ uche na ntinye ya na iji ya dị mfe. Ụdị Windows nke Winrar, nke na-akwado usoro ZIP na RAR nụzọ zuru oke ma na-enye nkwado zuru oke maka ịchekwa akwụkwọ, bụ ngwa ama ama nụwa niile ka faịlụ ghara ịgbasa na gburugburu dijitalụ ma ghara iwepụta ohere dị ukwuu.
Kedu ihe bụ Winrar?
Winrar, nke a na -eji dị ka mmemme mkpakọ faịlụ, bụ ngwanrọ na -enyere aka ịchekwa akwụkwọ na mgbasa ozi dijitalụ. Eugene Roshal bụ onye nrụpụta ngwanrọ mbụ. Alexander Roshal mechara sonye na ndị otu Roshal maka mmepe ngwanrọ a. Akụrụngwa a, nke enyere ndị ọrụ nọtụtụ asụsụ, gụnyere English, bụ ngwa ọrụ dị mma maka nchekwa site na mbenata oke faịlụ yana mpikota faịlụ.
Taa, ọtụtụ faịlụ ebudatara na Ịntanetị na -egosi dị ka faịlụ abịakọrọ. Iji jiri ma ọ bụ mepee faịlụ ndị a, a ga-etinye mmemme mkpakọ faịlụ Winrar na kọmputa ahụ. Winrar, nke bụ mmemme achọrọ mkpakọ na ịchekwa faịlụ ndị dị adị, yana imepe na iji faịlụ abịakọrọ ebudatara na ịntanetị, na -eme ka ọrụ onye ọrụ nwee ọtụtụ uru.
Kedu ihe Winrar na -eme?
Ka anyị depụta ihe kpatara Winrar, mmemme emere iji ụdị RAR nke ọtụtụ iri sistemụ na -akwado, dị mkpa dị ka ndị a:
Nchedo: Nchedo faịlụ na kọmpụta abụrụla okwu dị mkpa. Mkpokọta na idebe faịlụ na -abụkarị uru maka onye ọrụ nihe gbasara nchekwa. Mgbe ejikọtara paswọọdụ faịlụ na faịlụ echekwara, ọ na -echedo ha karịa iyi egwu nje karịa faịlụ mepere emepe. Faịlị abịakọrọ na ezoro ezo na -esiri gị ike ịkagbu site na nje karịa faịlụ ndị ọzọ.
Nhazi faịlụ: Compmekọta na ịchekwa ọtụtụ faịlụ na kọmputa ebe otu ma ọ bụ karịa faịlụ na-arụ ọrụ dị mkpa na nhazi faịlụ. Tebụl juputara na anya na-adọrọ adọrọ bụ gburugburu ọrụ na-emetụta arụmọrụ ọrụ na-adịghị mma. Mkpakọ na ịchekwa faịlụ nụzọ ahaziri bụ ihe dị mma maka onye ọrụ.
Ichekwa ohere: Site na Winrar, ọ na -adị mfe ịnweta faịlụ achọrọ, ohere nke faịlụ dị na draịvụ ike na -ebelata. Site nichekwa ohere na oke ego, a na -eji kọmputa arụ ọrụ nke ọma. Niburu nuche na Winrar belatara faịlụ 80%, ọ ga -aghọta nke ọma oke ịchekwa ohere.
Uru otu faịlụ: E wezụga idobe faịlụ dị ka otu faịlụ, Winrar na-enyere aka ibudata faịlụ ebudatara na ịntanetị ka ọ bụrụ faịlụ karịa otu otu, ọ na-ewepụkwa nsogbu nke ịchọta folda nke faịlụ ebudatara otu. -otu.
Nyefe faịlụ: Ibufe faịlụ notu notu site na e-mail na-enye nnukwu nsogbu nihe gbasara ọrụ na oge. Agbanyeghị, dị ka otu faịlụ, mbufe na -adị ngwa ngwa, ibugote faịlụ na ịntanetị na -adị mfe. Nọsọ nke oge a megide oge, nnyefe ọtụtụ faịlụ gaa na ndị ọzọ nwere otu ọpịpị na -azọpụta oge ma hụkwa na a na -ebugara akwụkwọ echekwara notu faịlụ notu ndị ọzọ na -ahazi nụzọ enweghị ahafe.
Uru dị na mkpokọta: Winrar, nke dị mfe iji, ngwanrọ arụ ọrụ yana sistemụ ngwanrọ arụ ọrụ, bụ mmemme na -arụ ọrụ na -abụghị oke ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ na -enyekwara ndị mmepe mmemme aka na iwu njikwa. Ka anyị kwuo na a na -ejikọ faịlụ mmelite 20 MB na 5 MB. Mgbe onye ọrụ chọrọ ime mmelite ọ bụla, ọ ga -enwe uru nke 15 MB.
Kedu ihe bụ atụmatụ Winrar?
Winrar, mmemme mkpakọ faịlụ ngwa ngwa yana nchekwa, na -adọta uche ya na ọtụtụ atụmatụ ọrụ ya ma e jiri ya tụnyere mmemme mkpakọ ndị ọzọ. Ya bụ:
Ninwe atụmatụ asụsụ English, Winrar nwere nkwado RAR na ZIP 2.0 zuru ezu.
Ngwa 32-bit na 64-bit Intel na ụda, egwu na faịlụ eserese na-eme ngwa ngwa yana ọfụma maka algorithm dị elu na ngwa ngwa.
Mkpakọ faịlụ dị ngwa ma dịkwa mfe site na ịdọrọ na dobe faịlụ ahụ.
Ọ nwere atụmatụ nke ịpịkọta na ịdekọ ọtụtụ faịlụ 10% -50% karịa mmemme mkpakọ ndị ọzọ.
Ọ na-eweghachite faịlụ ndị mebiri emebi ma chọọ ka eweghachi ya na arụmọrụ karịa 10% -50% karịa mmemme mkpakọ ndị ọzọ.
Aha faịlụ nwere koodu zuru ụwa ọnụ (Unicode).
Enwere ike gbanwee faịlụ Ukb, nkọwa ebe ndebe akwụkwọ, izo ya ezo 128 na ndekọ njehie na ọtụtụ isiokwu na nkwado interface.
Ewezuga RAR na ZIP, ọ nwere ike ịgụ ma tụgharịa usoro ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z na Z.
Ọ bụ mmemme efu na -akwado asụsụ English.
Etu esi eji Winrar?
Ọ bụrụ nịchọrọ ịpịkọta ma chekwaa faịlụ gị na Winrar, ihe mbụ bụ ibudata mmemme ahụ na kọmputa gị site na ịsị Budata Winrar. Site na Winrar ị nwere ike mpikota faịlụ nụdị 2 dị ka RAR na ZIP. Iji Winrar dị mfe ma dịkwa irè. Ugbu a, ka anyị dokwuo okwu a anya site na ịkọwa iji usoro Winrar Windows.
Malite site na ịnakọta faịlụ ịchọrọ ịkpakọ na folda. Nikwu ya nụzọ ọzọ, nasụsụ kọmputa, faịlụ ndị a ga -ejikọ ọnụ ga -abụrịrị notu URL. Idebe folda a na desktọọpụ na -eme ka ọrụ gị dị mfe.
Pịa aka nri na faịlụ ịchọrọ ịpịkọta. Ị ga -ahụ nhọrọ 4, yana Tinye na ebe ndebe akwụkwọ na mbụ. Gaa nihu site na ịpị Tinye na ebe ndebe ihe. Ị nwere ike họrọ ebe faịlụ ịchọrọ mpịachi site na ebe a, ị nwere ike họrọ site ninyocha ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ka anyị kọwaa ojiji Winrar, malite na ngalaba General” nke interface Winrar.
Tab na Winrar
Na taabụ General nke interface Winrar, enwere nhọrọ 7 na -emetụta mkpakọ faịlụ, ogo na ojiji.
Usoro Ọbá akwụkwọ
Kewaa Site na Mpịakọta
Dabere na nhọrọ emere na nhọrọ ọ bụla, faịlụ abịakọrọ na -abawanye uru na ngwa ngwa maka onye ọrụ.
1 - Aha Archive
Ngalaba aha ebe ndebe akwụkwọ bụ ngalaba ebe echekwara faịlụ a. Ọ bụrụ na ị họrọghị ebe ị ga -echekwa faịlụ a, a ga -echekwa faịlụ gị na ngalaba a. Mgbe ịchọrọ ịgbanwe ọnọdụ ịchekwa, ị nwere ike pịa bọtịnụ Chọgharịa wee họrọ ngalaba ịchọrọ mpikota faịlụ. Enwere ike ịhọrọ ọnọdụ nke faịlụ abịakọrọ na mbụ site na igbe ndọpụta.
2 - Profaịlụ
Ọ bụ nhọrọ na -azọpụta oge maka ndị ọrụ Winrar ma na -agbakọ faịlụ ndị a ka nha ha chọrọ site na kewaa ha nime akụkụ. Ị nwere ike kewaa faịlụ 5GB nime akụkụ wee jiri ebe nchekwa flash 1GB bugharịa ya site notu ebe gaa ebe ọzọ. Ihe ịkwesịrị ime maka nke a bụ imepụta profaịlụ 1 GB na ngalaba profaịlụ wee chekwaa ya site na ịhọrọ usoro mkpakọ.
Nhọrọ profaịlụ, nke ndị nwe ọgbakọ na -eji ọtụtụ, na -eme ka ọ dị mfe bulite 100 MB na ọrụ nchekwa faịlụ igwe ojii.
3 - Usoro Ọbá akwụkwọ
Nke a bụ ngalaba ebe ahọpụtara ụdị faịlụ a ga -eji mpikota onu. Na -akwado mmemme RAR na mmemme ZIP, Winrar na -enyere aka ịdebe akwụkwọ kachasị mma na ZIP yana faịlụ izugbe na RAR.
4 - Usoro mkpakọ
Nime nhọrọ mkpakọ, ọ bụ njirimara na -ekpebi nha faịlụ a ga -agbakọta ma na -emetụta ogo faịlụ ahụ. Usoro ndị na-ewe obere oge iji mpikota onu ga-ebute mkpakọ dị ala. Ogologo oge mkpakọ, ka mma mkpakọ ahụ ga -adị. Na mpio nke meghere na usoro mkpakọ;
Ọ nwere nhọrọ.
I kwesịrị icheta na mgbe ị na -mpikota ọnụ nụdị kachasị ọsọ, ị ga -eji faịlụ kacha mma were mpịakọta faịlụ ahụ.
5 - Kewaa nime mpịakọta
Ọ na -enye mkpakọ nke faịlụ a ga -eji mpịakọta kewaa ya iberibe nha. Ị nwere ike mpikota faịlụ 20GB site na kewaa ya na faịlụ 5GB. Pịnye nha nke akụkụ dị na nhọrọ ahụ, a ga -ekewa faịlụ gị na akụkụ nke nha ahụ.
6 - Ọnọdụ mmelite
Ọ na -enye ohere imelite na faịlụ abịakọrọ na ebe echekwara. Ọ bụrụ na faịlụ a ga -agbakwunye bụ otu faịlụ dị na ebe ndebe akwụkwọ, ọ na -enye nhọrọ.
7 - Nhọrọ Archiving
Nhọrọ ịchekwa akwụkwọ bụ otu nime ihe pụrụ iche na nke kachasị mkpa Winrar ma e jiri ya tụnyere mmemme mkpakọ ndị ọzọ. Ọ na -enye nhọrọ maka ojiji faịlụ noge ma ọ bụ tupu ịdebe faịlụ. Ndị a;
Mepụta ebe nchekwa siri ike
Mepụta ebe nchekwa SFX
Iwu nhichapụ faịlụ mgbe ịdebe iwu nyere ohere ka ewepụ faịlụ a na diski ike.
Iwu faịlụ echekwara ule na -enye ohere ihichapụ faịlụ mkpakọ mgbe anwalechara.
Mepụta iwu Solid Archive bụ usoro mkpakọ eji mee ihe na usoro RAR. Ya mere, enwere ike ịpịkọta faịlụ ndị ahụ nụzọ ka mma.
Iwu mepụta ebe nchekwa SFX bụ njirimara nke ime ka emepe faịlụ a na kọmputa na -enweghị Winrar arụnyere. Faịlụ bufere na -enye ohere imepe faịlụ ọbụlagodi na etinyereghị Winrar na kọmpụta ndị ọzọ, maka iwu a.
Tab dị elu na Winrar
Na taabụ di elu;
• Okike okwuntughe • Ntọala mkpakọ • Ntọala SFX • Ogo mgbake • Ntọala olu
Na ngalaba a, ị nwere ike mepụta okwuntughe, mee ntọala mkpakọ, mee nha nha na ntọala olu, wee mepụta faịlụ dị mma.
Nhọrọ taabụ na Winrar
Na taabụ Nhọrọ, enwere bọtịnụ hichapụ faịlụ mgbe emechara ya” na ọnọdụ mmelite. Nebe a ị nwere ike ịhazigharị dịka ịchọrọ.
Tab faịlụ na Winrar
Na taabụ Faịlụ, ị nwere ike kewaa faịlụ ndị ị na -achọghị itinye na faịlụ echekwara, wee megharịa faịlụ abịakọrọ gị.
Ndabere Tab na Winrar
Nke a bụ ngalaba ebe echekwara faịlụ ezoro ezo yana ebe akwadoro ya. Usoro ihe omume a ga -echekwa faịlụ abịakọrọ na nkebi ahọrọ.
Oge taabụ na Winrar
Nke a bụ ngalaba ebe edobere oge ebe ndebe akwụkwọ.
Nkọwa nkọwa na Winrar
Ọ bụ akụkụ nke agbakwunyere nkọwa na faịlụ emepụtara. Ị nwere ike mezue usoro mkpakọ faịlụ site na ịgbakwunye nkọwa gbasara ọdịnaya faịlụ ma ọ bụ nkọwa ịchọrọ na faịlụ gị.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị pịa nri na faịlụ a ga -ejikọ aka wee jiri iwu mkpakọ nke abụọ, Winrar ga -mpikota ngwa ngwa.
Mgbe ahọpụtara mpịakọta na ozi e-mail, a na-etinye faịlụ ahụ notu folda ma tinye ya na ngalaba Mgbakwụnye nke mmemme email ahụ.
Na mpikota onu, Aha faịlụ ma zipụ iwu E-mail, a na-etinye faịlụ temp ahụ ma tinye faịlụ ahụ na adreesị ozi-e ndabara.
Kedu ụdị ndọtị faịlụ Winrar na -akwado?
Ọ bụ ndọtị faịlụ na -egosi ụdị na usoro faịlụ dị na ya. Faịlụ niile ejiri na kọmputa nwere ndọtị. Nihi ndọtị ndị a, ị nwere ike nweta echiche nke ihe faịlụ a bụ yana ihe mmemme na -akwado faịlụ a dị na sistemụ arụmọrụ. Site nịlele ndọtị nke faịlụ ọ bụla ebudatara na ịntanetị, anyị nwere ike mụta na anyị nwere ike mepee faịlụ ahụ na Excel ma ọ bụ Open Office.
Ị nwere ike wepu faịlụ ebudatara ma ọ bụ ozi e-mail na Winrar. Nihi na Winrar, nke bụ mkpakọ faịlụ na mmemme ịchekwa faịlụ, na -akwado ọtụtụ ndọtị faịlụ dịka ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z na Z, ewezuga RAR na ZIP. Faịlụ RAR na ZIP bụ faịlụ a na -ejikarị. Ịnwere ike ibudata sọftụwia Winrar nefu iji mepee faịlụ ndị a, ị nwere ike mepee ma jiri faịlụ ndị a nwere atụmatụ nlele faịlụ, nke so nọtụtụ nhọrọ Winrar nyere.
Na -enye mkpakọ ka mma karịa ZIP, RAR dị ike na njikwa ebe a na -edebe akwụkwọ. Imepe faịlụ nwere ndọtị RAR, ị nwere ike iwunye Winrar, nke bụ mmemme mkpakọ kacha amasị.
Kedu nke bụ Usoro mkpakọ kacha mma na Winrar?
Winrar, nke na -enyere aka ịpịkọta faịlụ na idebe ya na gburugburu kọmputa, na -enye azịza dị oke mma maka ohere nchekwa na nsogbu nchekwa. Ọzọkwa, a na -echekwa faịlụ mgbe niile, na -abawanye arụmọrụ onye ọrụ. Nagbanyeghị etu usoro teknụzụ siri dị elu, nsogbu nchekwa data na-enye ndị ọrụ nsogbu mgbe niile. Ọ bụ ezie na e mepụtala diski ike na USB nwere nnukwu ebe nchekwa, ọ na -achọ idobe faịlụ ndị ahụ na gburugburu kọmputa. Winrar, nke a na -eji dị ka mmemme mkpakọ kacha mma noge a, na -azọpụta ndụ site na ịchekwa ohere yana atụmatụ ọrụ ya.
Ụzọ mkpakọ faịlụ Winrar
Winrar, nke bụ sọftụwia kachasị ahọrọ ma e jiri ya tụnyere ndị na -asọmpi ya na mkpakọ faịlụ yana idebe faịlụ na arụmọrụ ya, bụ mmemme mkpakọ faịlụ kacha ewu ewu nụwa. Nụwa taa, ebe egwuregwu etolitere nke ọma ma e jiri ya tụnyere afọ iri gara aga, ebe 1 GB nke ebe nchekwa dị nime afọ ole gara aga, taa ikike a dị netiti 30-50 GB. Ndị na -ejighị mmemme mkpakọ Winrar, naka nke ọzọ, na -edebe faịlụ nke ha na -eji nke kacha nta ma ọ bụ nke ha ga -ehichapụ ma ọ bụ gbanye ọkụ. Ebe Winrar bụ mmemme mkpakọ dị elu nke ị nwere ike chekwaa nnukwu faịlụ site na kewaa ya na akụkụ. Enwere ike ibugharị faịlụ ndị kewara nime akụkụ nenweghị nsogbu na draịvụ mbughari.
Na -ekewa faịlụ nime akụkụ
Pịa aka nri na faịlụ ịchọrọ mpikota onu na Winrar, na ihuenyo gbakwunye na ebe ndebe akwụkwọ enwere ngalaba kewaa na mpịakọta, nha. Nebe a, a ga -abanye nọmba ole MB ga -ekewa faịlụ wee pịa bọtịnụ OK. Ya mere, Winrar na -edobe faịlụ buru ibu nụzọ dị mma site na kewaa ya na akụkụ. Na nhọrọ Tinye na ebe ndebe akwụkwọ, a na -ahọrọ nhọrọ mkpakọ Kachasị mma, a na -ejikọ faịlụ ahụ nobere oge karịa ka ọ dị na mbụ, mana nụzọ kacha mma.
A na -ezochi aha faịlụ site na ịtọlite ​​paswọọdụ maka faịlụ dị na taabụ di elu. Ọ bụrụ na ezoroghị faịlụ faịlụ, Winrar agaghị ajụ maka paswọọdụ mgbe imepe faịlụ ahụ. Agbanyeghị, ọ na -arịọ maka paswọọdụ megide arịrịọ ka ịlele ma ọ bụ detuo data ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka echedo faịlị gị ka ọ ghara ịhụ anya ma debe ya na nzuzo, ị kwesịrị ịga maka izo faịlụ maka nchekwa.
Winzọ Kachasị mkpakọ
A ga - ahọrọ nhọrọ Kacha mma maka mkpakọ arụmọrụ dị elu nke faịlụ ahụ. Site na nhọrọ a, nke nwere ogologo mkpakọ ogologo karịa ka ọ na -adị, a na -ejikọ faịlụ a yana arụmọrụ kacha mma. Yabụ, Winrar na -eme usoro mkpakọ ahụ kacha mma.
Mgbe ịhọrọ usoro mkpakọ site na ịpị nhọrọ Kachasị mma, a ga-enyocha igbe Mepụta Solid Archive na mpaghara uhie na nri. Mgbe nkewa nkewa na mkpebi paswọọdụ, a na -enyocha nhọrọ Mepụta Solid Archive wee malite usoro mkpakọ site na ịpị bọtịnụ OK. Archive siri ike bụ usoro mkpakọ nke onye nwe ya, ọ bụ naanị ihe ndekọ RAR na -akwado ya. Ebe nchekwa ZIP esighị ike. Ebe nchekwa ihe siri ike na -arụ ọrụ nke ọma nịkpakọba faịlụ ndị yiri ya na ndị buru ibu.
Naka nke ọzọ, mmelite nchịkọta siri ike adịghị nwayọ nwayọ, a ga-edozigharị ebe nchekwa niile iji wepụ faịlụ site na ebe nchekwa siri ike. Notu oge ahụ, ọ gaghị ekwe omume wepụta faịlụ mebiri emebi na ebe nchekwa siri ike.
Ọ bụrụ na ịgaghị na -emelite faịlụ ndị dị na ebe ndebe akwụkwọ ugboro ugboro wee wepu faịlụ ọ bụla na ebe ndebe akwụkwọ ugboro ugboro, ị nwere ike họrọ nhọrọ ebe nchekwa siri ike. Ma ọ bụghị ya, mkpakọ na -enweghị nyocha nhọrọ Mepụta nhọrọ nchekwa siri ike ga -abụ usoro mkpakọ kacha mma.
Ekwesịrị ịmara na Winrar enweghị ike mpikota karịa 5-10 MB maka faịlụ JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3. Nihi na faịlụ ndị a bụ faịlụ abịakọrọ.
Oke mkpakọ kacha mma bụ maka faịlụ dabere na ederede. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịpịkọta akwụkwọ Okwu site na 80%.
Kedu Technologies Compression na Winrar Jiri?
Winrar bụ onye mbụ netiti sọftụwia na mkpakọ faịlụ yana idebe faịlụ. Ihe karịrị nde mmadụ 500 gburugburu ụwa na -eji Winrar. Ihe mmemme a, nke were ocheeze WinZip, na -enweta isi ihe zuru oke naka ndị ọrụ nwere nhọrọ asụsụ English ya. Ka anyị nyochaa teknụzụ mkpakọ na -eme Winrar zuru oke ma depụta uru ha.
Mkpakọ faịlụ Winrar
Nime ụzọ mkpakọ faịlụ Winrar, enwere nchekwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa, nkịtị, dị mma na nhọrọ kacha mma. Nhọrọ ndị a, nke na-apụta mgbe ịpị aka nri na faịlụ a ga-agbakwụnye wee kwuo tinye na ebe ndebe akwụkwọ, chọpụta arụmọrụ na ịdị mma nke faịlụ abịakọrọ na nhazi. RAR na ZIP bụ usoro mkpakọ kachasị amasị na Winrar.
Ọ bụrụ na a ga -ekerịta ma ọ bụ bufee faịlụ ọzọ jikọtara na RAR, a ga -etinyerịrị sọftụwia Winrar na kọmpụta nke ezigara faịlụ a. Ma ọ bụghị ya, a ga -enwe nsogbu imepe faịlị ahụ. Faịpịpịpịpị zip bụ faịlụ nke onye ọrụ nwere ike iji WinZip mepee. Ọ bụrụ na etinyeghị ya na WinZip, o yighị ka ọ ga -ekwe omume imepe faịlụ a na -enweghị Winrar.
A na -ekpebi usoro mkpakọ site naka onye ọrụ chọrọ mpikota faịlụ. Netiti nhọrọ, nhọrọ Kachasị mma” bụ usoro nke na -agbakọ faịlụ ahụ nogo kachasị ma na -ewe obere oghere. Naanị ihu ala bụ na usoro a na -ewe obere oge karịa nhọrọ ndị ọzọ. A pụkwara ịhọrọ usoro mkpakọ kacha mma ma ọ bụrụ nha faịlụ erughị 100 MB yana arụmọrụ kọmputa dị mma. Ọ bụrụ na kọmputa adịghị nwayọ na nha faịlụ ga-abịakọrọ buru ibu, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịhọrọ nhọrọ kachasị ọsọ.
Idobe faịlụ Winrar
Otu njiri mara Winrar dị ka teknụzụ mkpakọ faịlụ bụ izo ya ezo faịlụ. Agbanyeghị na ọ bụ ngwanrọ mkpakọ, ọ dịkwa mma dị ka ngwanrọ izo faịlụ. Ọ dị mkpa ka izo ya ezo maka nchekwa ka mma taa. Usoro izo ya ezo, nke na -egbochi ịnweta akwụkwọ ndị dị mkpa, na -enye ohere imeghe faịlụ mkpakọ ahụ naanị site naka onye ọrụ ọ bụ. Ọbụlagodi ịnweta faịlụ a, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume ịgbawa paswọọdụ nchekwa 128-bit.
Nkwado nhazi ọtụtụ ihe
Versiondị winrar kachasị ọhụrụ na-akwado nhazi ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ihe nrụpụta nwere ọtụtụ ihe, ị kwesịrị iji ya mee ihe. Nihi na ụdị Winrar kachasị ọhụrụ na-eji ọrụ nhazi ọtụtụ ihe arụ ọrụ. Yabụ ị nwere ike ịme azụmahịa ngwa ngwa. Iji nwalee; Gbaa ngwanrọ a, tinye menu ntọala site na Nhọrọ, rụọ ọrụ nhọrọ Multithreading na taabụ General.
Nnwale PC na Winrar
Ị ma na ị nwere ike nwalee PC na winrar? Ị nwere ike tụọ arụmọrụ kọmputa gị site na nnwale PC, nke bụ otu nime ọrụ kacha mma Winrar. Ịnwere ike mụta akara Winrar na -enye sistemụ arụmọrụ gị, ị nwere ike ikpebi ihe ị nwere site nịmụta arụmọrụ kọmputa gị.
Iji Winrar nwalee PC; Gbaa ngwanrọ winrar, gaa na menu Ngwaọrụ, lelee nhọrọ nnwale na ngwa ngwa, nweta nsonaazụ ozugbo.
Naghachi faịlụ mebiri emebi
Otu nime ihe ndị na-agbawa obi maka onye ọrụ bụ nrụrụ faịlụ. Enweghị ike mepee faịlụ ahụ rụrụ arụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ faịlụ dị mkpa, ọ na -emepụta nnukwu nsogbu. Winrar na -abatakwa nokwu a. Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeghe faịlụ echekwara ma mebie faịlụ, ị kwesịrị ị nweta enyemaka site na Winrar. Maka nke a; Gbaa Winrar, Họrọ faịlụ nke ịchọrọ ịrụzi na ngwanrọ a, Pịa bọtịnụ nrụzi dị nelu aka nri
Ịrụ ọrụ Bit
Ọ bụrụ na kọmputa gị bụ 64-bit, anyị na-akwado ka ị jiri nhọrọ 64-bit Winrar. Ọ bụrụ na ịnweghị ozi gbasara otu esi enweta uru, ka anyị kọwaa ya ozugbo. Winrar 64 bit na -enye onye ọrụ nnukwu uru nihe gbasara arụmọrụ igwe yana ojiji ya. Nyochaa ngalaba ụdị sistemụ na mpio nke mepere site na ịpị igodo Windows + kwụsịtụ notu oge. Ọ bụrụ na enwere nkọwa sistemụ arụmọrụ 64-bit ebe a, anyị na-akwado iji ụdị Winrar 64-bit.
Nha faịlụ: 3.07 MB
PeaZip archiver bụ usoro ihe ntanetị na nefu maka ndị ọrụ kọmputa. Mepụtara dị ka ihe mepere emepe,...
InnoExtractor bụ mmemme dị ntakịrị ma dị irè nke ị nwere ike ịnweta faịlụ ndị dị na faịlụ ntinye...
Zipware bụ mmemme mmemme mkpakọ siri ike nke ị nwere ike iji na kọmputa gị. Na mmemme na-akwado ihe...
Ashampoo Zip Free bụ usoro mmemme na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta ma mepee ebe nchekwa. Ashampoo Zip...
Nwere ike ịlele faịlụ nchekwa ZIP na kọmputa gị na sekọnd na ngwa Zip Opener. Ngwa ZIP Opener, nke...
PowerArchiver bụ usoro nchekwa ederede dị ike nke na-akwado usoro faịlụ ejiri jikọtara ọnụ taa,...
Bitser bụ ngwa dị mfe iji, kọmpat na-enye gị ohere idobe na chekwaa faịlụ gị. Bitser, nke pụtara na...
Akwụsịla mmemme a. Ị nwere ike ịchọgharị na ngalaba faịlụ Compressors iji lelee ụzọ ọzọ. uZip bụ...
UltimateZip bụ mkpakọ faịlụ dị mfe iji yana mmemme decompressor na-akwado ZIP, JAR, CAB, 7Z na...
Onye na -ewepụta faịlụ, ụdị WinRaR dị iche, bụ mmemme mbibi faịlụ na -enye gị ohere imepe faịlụ...
Ị nwere ike jiri ngwa 7Zip Opener mepee faịlụ ebe ndebe faịlụ dị mfe maka sistemụ arụmọrụ Windows...
MSI Unpacker, dị ka aha ya na -egosi, bụ mmemme mmemme nke na -enye gị ohere imepe faịlụ na faịlụ...
Cat Compress bụ onye njikwa ebe a na -edebe ihe ochie nke na -enyere ndị ọrụ aka ịmepụta ma wepụta...
Advanced Installer bụ ngwa Windows Installer na -ede akwụkwọ. Ihe mmemme a nwere interface dị mfe...
Ụlọ ọrụ Ashampoo kwadebere mmemme Ashampoo ZIP Pro, nke na -emepụta mmemme dị iche iche nọtụtụ...
ISO Compressor bụ mmemme mkpakọ faịlụ ISO bara uru maka ndị ọrụ Windows iji belata nha ha wee nweta...
Ị nwere ike ịlele faịlụ ebe ochie a ma ama na kọmputa gị ngwa ngwa site na iji ngwa RAR Opener....
DMG Extractor bụ sọftụwia efu na nke bara uru mepụtara iji mepee faịlụ onyonyo diski ejiri na macOS...
7-Zip SFX Onye kere bụ mmemme mepere emepe faịlụ SFX nke dị maka ndị ọrụ nefu. Ewezuga ịbụ mmemme...
7z Extractor bụ mmemme mmeghe faịlụ nke na -enyere ndị ọrụ aka imepe 7z, yana na -akwado usoro...
ZIP Reader bụ mmemme bara uru yana nke akwụghị ụgwọ maka ndị ọrụ iji mepee faịlị faịlụ na ndọtị...
Mara: ewepụrụ mmemme a nihi nchọpụta ngwanrọ ọjọọ. Ọ bụrụ na -ịchọrọ, ị nwere ike lelee mmemme ọzọ...
MagicRAR bụ onye njikwa ebe a na -enyere ndị ọrụ aka mepee faịlụ ZIP na RAR, mepụta faịlụ ebe...
Zipeg bụ ngwa na -aga nke ọma ị nwere ike iji lelee ma mebie ọdịnaya nke faịlụ abịakọrọ dị ka ZIP,...
Zip ngwa ngwa bụ mmemme mkpakọ faịlụ dị ike yana ngwa ngwa na -akwado usoro ebe a na -edebe ihe...
Ọ bụ mmemme mkpakọ faịlụ dị elu nke na -akwado ọtụtụ mkpakọ maka faịlụ na nchekwa gị, ị nwekwara...
WinArchiver bụ mmemme nlele na imepụta ihe na -akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọbá akwụkwọ...